प्रधानमन्त्री ओली–ठाकुर भेट आज
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग आइतबार (आज) भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । राजपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संयोजक ठाकुरसँग समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गर्नेछन् ।
राजपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा पनि भेटका क्रममा छलफल हुने बताइएको छ । पार्टीले संविधान संशोधन र फौजदारी अभियोग लगाइएका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ गराउनुपर्ने माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा राजपाले सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । सो समर्थन संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्ने सर्तमा दिइएको थियो । तर, त्यसो नगरिएकाले पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक अल्टिमेटम बुझाएको थियो । पार्टीले बुझाएको अल्टिमेटमअनुसार सरकारले छठ अघि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो ।
पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले सरकारले संविधान संशोधन लगायतका माग पूरा नगरे पार्टीले भद्र अवज्ञा आन्दोलनको रूपरेखा बनाउन शीर्ष नेतृत्व लागिपरेको बताए ।
उनले भने, “हामीले आन्दोलनको तयारीबारे पनि छलफल गरिरहेका छौं । तर ,सरकारलाई दिइएको समय सीमासम्म हामी पर्खनेछौं ।” संविधान संशोधनलगायत विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसलाई अझ विश्वसनीय तवरले समझदारी तय गर्न प्रधानमन्त्रीले ठाकुरसँग एक्लाएक्लै भेट्ने तय भएको ठाकुर निकट स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीले उठाएको राजनीतिक माग सरकारले पूरा गरे राजपा सरकारमा जाने निर्णय गर्छ ? भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उपाध्यक्ष मण्डलले भने, “पहिले संविधान संशोधन हुन दिनुस् । राजनीतिक दलले सरकारमा जाने र नजाने दुवै राजनीतिको उपयोग समय र आवश्यकताअनुसार गर्छ । संघीय समाजवादी फोरम यसअघि बढी विश्वस्त भएर गयो, हामीलाई विश्वास लागेन हामी गएनौं ।”
देशको भूभाग फिर्ता गर्न लागिपरेका छौं
सरकारको काम हेरेर जनताले पश्चताप गर्न थालेः डा. महत
तीन देशका राजदूतले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र